SIDA LOOLA TACAALO CUDURADA IYO CAYAYAANKA YUCCA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Yucca waa warshad kuleyl ah oo ku koraysa xaalad dabiici ah oo leh abaaro xoog leh waxayna u bedeli kartaa geedka weyn. Waa sahlan tahay in lagu koro warshadkan guriga, laakiin qulqulka ayaa jira cuduro saameyn kara, waana muhiim in ninkii beerta oo idil inuu ogaado sida loola macaamilo.
Cudurada Yucca: ka hortagga iyo daaweynta
Beerta ycca maaha mid ku xiran qiimaha nafaqada ee carrada iyo sida caadiga ah ee waraabinta, maadaama ay tahay xad-dhaafka qoyaanka ee badanaa keena muuqaalka cudurada dhirta. Aynu ogaanno tallaabooyinka looga hortagayo kuwa ugu caansan.
Yucca ma Bloom
In dabiiciga ah, warshad geedka Yucca Blooms kasta xagaaga leh panicles of inflorescences ee midabada kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, ma aha in dhammaan beeralayda xirfadlayda ay maamulaan si ay u gaaraan ubax of yuqua., iyo xitaa in lagu koriyo, waxay dhif yihiin Bloom, sababta oo ah waa muhiim in warshad this si ay u abuuraan sida ugu dhow xaaladaha dabiiciga ah sida ugu macquulsan. Laakiin tan iyo markii guriga aan ku hubin karin maalinta iftiin mudda dheer iyo heerkulka ugu fiican, waxaan kaliya oo aan ku faraxsanahay taajirada raaxada ah ee warshadan.
Ma taqaanaa? Inta badan ee muuqaalka ubaxyada waa inay ilaaliyaan yuqua 4-5 sano. Beeralay waaya-aragnimo waxaa lagula talinayaa in aan laga saarin caleemo hoose oo caleemo ah oo laga soo gooyey geedka, tan iyo markii daryeel noocaas ah, oo aan caadi ahayn xaaladaha dabiiciga ah, ma ogola inay dareemaan raaxo iyo farxad.
Bakteeriyada gubashada caleemaha yuqua waa dhif, laakiin waxay gabi ahaanba saameyn kartaa geedka oo dhan. Cudurkaan, dhibco yaryar ayaa ka muuqanaya yuqua, oo markii ugu horeysey midabka huruud ah, laakiin ugu dambeyntii madow.
Faafinta cudurka jirrada ee cudurkani wuxuu dhacaa marka qoyaanka uu ka sareeyo 70% heerkulku wuxuu ka sareeyaa 18 ° C. Si kastaba ha noqotee, yuqua waa iska caabinta gubashada bakteeriyadu waa xaalad ah meel nadiif ah, daaweyn jirtay ciidda iyo dheriyada loo isticmaalo si loo beero, la xiriirka dhirta kale waa la yareeyaa. Waa in la fahamsan yahay in cayayaanka ay noqon karaan ilaha gubashada, iyo yuqua wuxuu ku dhici karaa cayayaanka iyo xididdada dhaawacan.
Waxay ku dhowdahay in ay la qabsato gubasho bakteeriyo, sidaa darteed, oo leh faafin xoog leh oo dhibco huruud ah-brown on caleemaha yadu, waa in la tuuraa. Haddii dhibco ay ka muuqdaan caleemo dhowr ah, waa la saarayaa, geedka oo dhanna waxaa lagu buufiyaa dareeraha bordeaux ama antibiyootiko loogu talagalay daawada neefsiga, kaas oo aad ka joojin karto streptomycin.
Xaaladaha Brown ee caleemaha
Haddii caleemaha dhirta ay bilaabaan inayan hurudo jaalaha iyo hoos u dhac, laakiin yellowness waxay u muuqataa iyaga qaab qaabeysan oo ay si dhakhso ah u koraan meelaha cusub - waxay u badan tahay in ay tahay meel caleenta ah ee yuqua. Haddii aanay waqti daweynin, caleemaha ayaa bilaabi doona inay madow iyo qallafsanaadaan. Sababta loo horumariyo cudurkan oo kale ku saabsan geedaha ycca waa la'aanta waraabinta. Warshadu ma jecla in ay ka baxdo, si kastaba ha ahaatee, haddii dhulku dufan yahay dheriga aad u qalalan, yuaka wuxuu bilaabi doonaa inuu qalalo.
Si looga hortago dhibco brown on caleemaha yuqua, qolka farsamadu u muhiim tahay hawada si joogto ah iyo iska ilaali qoyaanka sii kordhaya, laakiin waraabinta waa in ay ahaataa mid aad u badan, inkastoo aan inta badan. Hubi in heerkulka qolka uusan isbeddelin. Haddii dhibco horeba u muuqdaan, ka dib marka lagu daro isbedelka xaaladaha sii kordhaya, yuaka waxay u baahan doontaa daaweyn gaar ah leh fungicides, oo ay ku jiraan Waxaad isticmaali kartaa daawooyinkan:
Oxyh (20 g oo biyo ah 10 litir);
Alirin-B (illaa 1 l oo biyo ah 2 xabbo oo ah daawooyinka);
Vitaros (2 ml walax ayaa loo isticmaalaa 1 l oo biyo ah).
Xalalka soo baxa ee fangasida ayaa loo isticmaalaa buufinta dusha sare ee yuqua. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku celcelisid daaweyntan seddex jeer, qaadashada nasasho 10 maalmood. Caleemo khafiif ah oo ka timid warshad waa in laga saaraa.
Xuduudaha Brown iyo talooyin caleen
Astaamo isku mid ah ayaa inta badan ku dhacda kiisaska marka hawada la qalajiyo qolalka sababtoo ah hawlgalka qalabka kuleylka. Qaar ka mid ah noocyada yuqua waxay u dulqaadan karaan sida caynkaas oo kale ah, laakiin badankoodu waxay bilaabaan inay qalalaan. Si looga fogaado caleemo huruud ah ee yuqua on geesaha iyo talooyin, isku day in aad kordhiso qoyaanka hawada sababta oo ah buufin joogto ah ee warshadda. Isla mar ahaantaana, maaha mid qiimo leh in lagu kordhiyo waraabinta, sababta oo ah qoyaan badan ayaa sababi kara rooti kallana.
Waa muhiim! Sabab kale oo lagu qalajiyo geesaha iyo talooyin caleemaha yucca waxay noqon kartaa content qaldan, taas oo geedka waxaa loo soo bandhigay qoraallo badan, iyo qadar qumman oo qoyaan ah. Xaaladdan, iskuday in aad dib u dhisto dheriga yuuka oo bedesho sida caadiga ah ee waraabinta.
Meel caleen caleen
Calaamadaha cudurkaan waa kuwo la dareemi karo, inkastoo ay si tartiib tartiib ah u korayaan: caleemaha waxaa ku jira dhuunta necrosis, ama dhibco iftiin ah ayaa ka muuqda cidhifyada caleemaha yuqua. Isla mar ahaantaana, dhammaan dhibcaha ciriiriga ahi waxay leeyihiin geeso madow. Goobaha ugu caansan ee cayayaanka waa caleemo jir ah oo ku yaal qaybta hoose ee geedka.
Maaddaama uu wakiilka keena barta cawliga ah waa fungus, waxay ku dhowdahay suurtagalnimada in ay la qabsato iyada oo ay dhacdo jirro xun. Caleemaha caleenta la saaray ayaa si fudud loo saaraa, iyo geedka oo dhan waxaa lagu daaweeyaa Fundazol. Si looga hortago tan, daaweynta fangasasadani si joogto ah ayaa loo samayn karaa, laakiin waxaa muhiim ah in laga hortago in lagu buufiyo yuqua biyo nadiif ah.
Qalab iyo xidid kedib
Daaweynta cudurrada noocan oo kale ah ee yuqua sida stem iyo kallana xidid maaha suurtagal maaha, sababtoo ah muuqaalkooda dhirta aad ayuu u saameeyey oo aan dib dambe u soo kaban karin. Astaamaha calaamadaha qallaylka qallaylku waa jilicsanaanta muuqaalka geedka-geedka, iyo weliba muuqaalka muuqaalka boogaha midabada cas ee dhalaalaya.
Marka xididada caleemaha rootiga caleemaha ay ka muuqdaan nidaamka asaasiga ah ee geedka, natiijada ah in unugyada gudaha ee xididada ay bilaabaan inay si tartiib ah u burburaan. Cudurkani wuxuu muujinayaa lafaha qaybta sare ee dhirta, caleemaha dhirta waxaa la sameeyay, daboolay nabaro mugdi ah. Nasiib wanaag, tani badanaaba ma dhacdo, dhirku wuxuu ku dhacaa inta lagu jiro gaadiidka.
Si looga hortago dabeecadda iyo qudhuntii rootka ayaa lagula talinayaa:
marka la beerto iyo dib u celinta yucca, nadiifin isku dar ah ciidda iyo dheriga;
ka hortagaya qulqulatada ciidda;
si ay u bixiyaan hoose ee dheriyada leh ycca drainage wanaagsan.
Sidee loola tacaalaa cayayaanka yucca?
Yucca fungus iyo cudurrada bakteeriyada - tani ma aha waxa ugu xun ee aad la kulmi karto marka ay sii kordheyso warshadan. Badanaa waxaa sidoo kale la soo bandhigaa cayayaanka kala duwan oo aan ku dhufan kareynin qurxinta jinka, laakiin sidoo kale waxay u horseedaa in la baabi'iyo.
Ma taqaanaa? Yucca waa warshad jecel kulaylka, sidaas darteed xitaa xilliga qaboobaha waa lagama maarmaan in la hubiyo heerkulka wanaagsan ee qolka, laakin isla waqtigaas yareeya xaddiga biyo-gelinta si aan u keenin suuska.
Waxaan ka hadleynaa cayayaanka oo quudiya caleemaha succulent ee yuqua, ama halkii, kaliya juice, taas oo keeneysa muuqaalka dhulalka dhintay dhintay. Haddii aad si dhow u eegto dhirta, waxaad arki kartaa duqsiyo cad oo yaryar, tani waa caddaan.
Waxaa jira habab badan oo lagula dagaalamo cayayaanka:
Ku dhaji meel u dhow dhirtii dhirta huruuda ah ee lagu xiro duqsiyada caadiga ah.
Isticmaal xakameynta cayayaanka dhirta, taas oo ah daroogada ugu fiican ee Aktara. Si aad u hesho xal 5 litir oo biyo ah, qoyaan 4 g walaxda.
Daawee warshadda saameeya Akarin, Iskra-Bio, Inta-Vir, Fitoverm. Si buuxda looga takhaluso cayayaanku waxay u baahan tahay ugu yaraan 4 daweyn, mudada u dhaxaysa oo aan ka badneyn 10 maalmood.
Iska daadi digsi
Pelletizer sidoo kale wuxuu quudiyaa dheecaanka unug ee yucca, markaa si tartiib tartiib ah u dhalashada naqaskan ayaa gebi ahaanba burburin kara geedka. Waxaad xaqiijin kartaa in yuqua uu dhab ahaantii ku dhuftey gaashaan been ah, waxaad ku dari kartaa xabadaha iyo dhibcaha jilicsan ee dhirta, iyo sidoo kale midabeynta meelaha aafoobay.
Way adag tahay in loola dagaallamo duqeynta been abuurka ah, sida gabbaadyada la midka ah ayaa ku yaala dusha sare ee cayayaanka, sababtoo ah waxay si joogto ah u dulqaadanayaan daaweynta cayayaanka. Sidaa darteed, in dagaalka ka dhanka ah cayayaan this, yuaka waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo:
khamriga caamka ah;
beddelida topoil ee dherer leh yuuka.
Caarada caarada ayaa sidoo kale waxay ku quudisaa soodhawrka guriga, iyo in jihada uu yahay yucca gaar ahaan soo jiidasho leh. Marka buqashadani ay ka muuqato qaybta hoose ee caleemaha dhirta, waxaa jiri doona midho cad, ka dibna waa caleen. Waqti ka dib, caleemaha ay saameeyeen caarada caarada, waxay luminayaan midabkooda waxayna bilaabaan inay si tartiib tartiib ah ugu daboolaan dhibco huruud ah.
Naxariista caarada caarada ayaa ah in kaliya ay saameysaa dhirta daciifka ah ee cudurada ay joogaan. Sidaa darteed, ka hortagga ugu fiican ee cayayaankan waa daryeelka saxda ah ee warshadda iyo dayactirka xaaladaha ugu wanaagsan.
Laakiin haddii caarada caarada ayaa horey u muuqata yuqua, geedka waa in lagu dhaqaa biyo qabow si loo dhaqo cayayaanka. Sidoo kale waxay u baahan tahay daaweyn leh acaricide - Vertimek ama Fitoverma. Tirada ugu yar ee daaweynta - saddex, mid kasta oo ka mid ah oo la qaban doono nasasho 10 maalmood ah.
Waa muhiim! Haddii yuaka lagu hayo xaaladaha khaldan, daaweynta kiimikada ka soo horjeeda caarada caarada ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso cayayaanka oo keliya.
Mealybug sidoo kale iska leh cayayaanka nuugista ah ee wiiqaya geedka, jaqayaa dhammaan juuska ka baxsan. Iyada oo la jabiyo mulkiyadooda waxaa si sahlan loo arki karaa caleemaha iyo xataa dogobka, inta badan caleemaha ayaa la daboolay sababtoo ah ubaxyada dhoobada leh. Waa wax aan suurtagal ahayn in la dilo cayayaankan iyada oo la adeegsanayo diyaar garowga, maxaa yeelay waxay leedahay dabool la mid ah, sida ilaaliye been ah. Sababtaas oo kale, marka ay soo baxdo mealybuga, waxaa habboon in la dagaalamo isaga oo la mid ah gaashaan been ah.
At qoyaan badan, yuqua ku dhufan karaa slugs. Waxaad ku baran kartaa joogitaankooda markaad huruud noqoto caleemaha, oo inta badan soo baxa xilliga jiilaalka. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka saari kartaa slugs gacmahaaga si kastaba ha ahaatee, si looga hortago muuqaal cusub, waxaa muhiim ah in lagu daaweeyo yuqua cayayaanka.
Dhammaan cudurrada kor ku xusan iyo cayayaanka ayaa badanaa u muuqda sida cawaaqibka daryeelka xanuunka ee yucca. Sidaa darteed, ka hortagga ugu fiican waa daryeel fiican, doorashada saxda ah iyo waraabinta si joogto ah warshadda.